Kudzidzira Kuziva - Neuropsychological uye kutaura kurapa kurapa muBologna - Kubata Kudzidziswa
Neuropsychological uye kutaura kurapa kurapa muBologna
EMO - Yemahara webhu-app yeanofacial myofunctional kurovedza muviri
Zvimwe zvekufungisisa, semurapi wekutaura, pabhuku "Izwi roga roga randaiziva" naAndrea Vianello
Iyo semantic kusagadzikana muvakuru: dzidziso uye yemahara kurovedza muviri
Mahara epamhepo kurovedza ekuverenga, kunyora, mutauro, ndangariro uye kutarisisa
A dialog-based kupindira yekudzora post-sitiroko kuora mwoyo uye kusagadzikana
Nzira yekusimudzira kuverenga kuburikidza nekukurumidza kutumidza mazita
Phonologically mazwi akafanana bhingo
Kuongorora kunetseka uye mhedzisiro yacho
Inogona kuyeuka episodic uye kutaura kwechienzi kufanotaura kudzikisira kwekuziva?
Migumisiro yecortical stroke muhucheche pahunyanzvi hwekuziva uye kudzidza kuchikoro
Kuita kwedzidzo mushure mekurwiswa muzera revana
"Kutamba" nemabasa makuru. Inochinja here nekunakidzwa?
Mwana wangu anotaura zvakaipa, asi anonyora mushe: ndeupi hukama pakati pemutauro nekunyora?
Mwana wangu anoverenga zvakanaka asi asinganzwisise zvaari kuverenga
Kurumidza kubatana: MutamboCenter - tachistoscope - Logocloud - Courses - Nhungamiro - Kadhi jenareta
Mahara pamhepo tachistoscope
Logocloud: mahara zviwanikwa
Zvidzidzo zvedu zvepamhepo
Mitauro yekurapa kwekutaura
Dzidzo kadhi jenareta
Neuropsychology uye kutaura kwekurapa muBologna
Iwe unoda here kukumbira kuongororwa?
Isu tinobata neuropsychological uye kutaura yekurapa kurapa uye kurapwa kwekuziva, mutauro uye kusagadzikana kwekudzidza, kugadzirisa masevhisi edu kune vepachikoro uye vezera rechikoro vana, vachiri kuyaruka nevakuru vechidiki.
ZVESE ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA: NZVIMBO, NGUVA, KODZERO.
peji	1 of	72
Game Center: Chii chaunoda kusimudzira?
Zvemahara zvinhu pakuverenga, kunyora, mutauro, Calculator, kutarisisa uye makuru mabasa!
Asynchronous epamhepo makosi evanyanzvi: gara uchikwira kusvika parizvino uye uchitevedzera nhanho yako wega!
Kudzidziswa kwekuziva Muchizvikudza dzinofambiswa ne WordPress